Sharciga iyo Amniga - Gargaarka Is-kaashatada ee Musiibada
Bogga ugu weyn/Sharciga iyo Amniga
Sharciga iyo Amniga2021-04-09T09:56:27-04:00
Foomka Taageerada Kooxda Affinity
Foomka taageerada kooxda isku xirnaanta
Golaha Xiriirka Islaamka Mareykanka Ogow Tusmadaada Xuquuqdaada
Golaha Xiriirka Mareykanka iyo Islaamka (CAIR) waa hay'ad samafal, urur u dooda xuquuqda madaniga.
Xarunta Wax Barashada Magaalada
Ka soo kabashada masiibada dabiiciga ah ayaa kugu adkaan karta adiga iyo reerkaagaba. Markuu madaxweynuhu ku dhawaaqo masiibo dabiici ah uuna ogolaado Kaalmada Qof ahaaneed, Hay'adda Maareynta Degdegga ah ee Federaalka (FEMA) waxay siin kartaa taageero milkiileyaasha guryaha iyo kireystayaasha u baahan caawimaad si ay uga soo kabtaan. Tilmaamahan wuxuu kaa caawin karaa inaad fahamto sida loo dalbado FEMA.
Xarunta Xuquuqda Dastuurka
Aasaaska FOIA ee Dhaqdhaqaaqayaasha
Aasaaska FOIA ee Dhaqdhaqaaqayaasha waxaa loogu talagalay inay ku taageerto dhaqdhaqaaqayaasha, abaabulayaasha iyo dhaqdhaqaaqyada bulshada gudbinta codsiyada FOIA si ay uga caawiso ololahooda socda iyo shaqadooda.
Aragtida Isbedelka Aragtida
Ka Qayb Qaado Qaab-dhismeedka: Qalabka Amniga Bulshada
Kusoo dhawow helitaanka qaab-dhismeedka, Aragtida Beddelidda Aragtida Bulshada ee Badbaadinta Bulshada Qalabkani waa ururinta hababka amniga iyo amniga ee aan dhiseynay waxna ka baranaynay sanadaha badan dhaqdhaqaaqa Black, Indigenous, iyo People of Color ee Maraykanka gudihiisa
Mike Haber iyo Dean Spade
Tilmaamaha loogu talagalay Ikhtiyaarrada Lacagta Loogu Qabto Kooxaha Gargaarka Wadaagga ah
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha fursadaha kala duwan ee loo wajahayo maaraynta lacagta kooxaha gargaarka wadaagga ah.
Midba midka kale ha dhawro Markay Fudud Ahaan Abaabulaan Kaalmeynta Labada Dhinac
Bulshooyinka dalka oo dhan waxay u talaabsanayaan is-abaabulidda kooxaha gargaarka wadaagga ah, iyagoo mideeya ku dhowaad inay u fidiyaan iskuduwaha taageerada kuwa u baahan. In lala midoobo baahida loo qabo jir ahaan ...
Ururka Qareenka Dhallinyarada Texas
Ogow Xuquuqdaada FEMA
Hay'adda Maareynta Degdegga ah ee Federaalka ("FEMA") ayaa isku dubarideysa doorka dowladda federaalka ee u diyaargarowga, ka hortagga, yareynta saameynta, ka jawaab celinta, iyo ka soo kabashada dhammaan masiibooyinka guriga ka dhaca, ha ahaadeen kuwo dabiici ah ama kuwo dad sameystay, oo ay ku jiraan falal argagixiso.
Ogow Xuquuqahaaga: Soogalootiga waxaa saameeya masiibooyinka federaaliga loogu dhawaaqay
Hagahan ayaa ka jawaabaya su'aalo dhowr ah oo la xiriira soogalootiga ay wax yeeleen daadadkii New Orleans.
Arimaha Sharci ee Hawlaha Caawinta Dadka: Tilmaanta Hordhaca ah
Adduunyada fog-fog halkaasoo aragtida guud ee jirta ay tahay in dhiig-miirashada, kala qaybsanaanta, iyo xukunku ay yihiin dabiici iyo caddaalad, ficillo fudud oo lagula wadaago wixii aan leennahay deriskeenna iyo bulshooyinka iyada oo laga duulayo dareen midnimo ayaa noqon kara ficilo siyaasadeed oo xad-dhaaf ah.
Waxbariddan khadka tooska ah ee internetka waxaa loogu talagalay kooxaha gargaarka wadajirka ah ee wajahaya lowska iyo arrimaha bolts ee la yimaada shaqadii aan wada qabanaynay. Sidee kooxdaada lacag ugu dirtay dadka dhibaateysan, maxayna yihiin cawaaqibta canshuuraha? Sideen u keydinaa lacag aan ururinno? Ma waxaan u baahanahay inaan tixgelinno ku darista, helitaanka kafaala maaliyadeed, ama noqosho mid aan macaash doon ahayn?
Mutual Aid Cafe Teaching-In
Soo-Bandhigayaasha: Tia Katrina Taruc-Myers (Xarunta Sharciga) Charlotte Tsui (Xarunta Sharciga) Sarah Kaplan (La-talinta Xariga Edge) AGENDA: 1. Hordhacinta gargaarka labada dhinac - Tusaalooyinka ...
Mutual Aid iyo Sharciga
Tani waa aqoon isweydaarsi ku saabsan qaar ka mid ah su'aalaha sharciga ee ugu caansan ee aan maqalnay oo ku soo aadaya kooxaha gargaarka wadaagga ah oo sameeyay wax ka qabashada masiibada. Waa ...
Qalabka Gargaarka Sharci ee Gargaarka
Xarunta Sharciga Dhaqaalaha ee Joogtada ah waxay abuurtay tilmaamahan kheyraadka sharciga ah iyada oo maskaxda lagu hayo shabakadaha gargaarka wadaagga ah. Bilowgii masiibada, waxaan bilownay inaan ka helno su'aalo abaabulayaasha bulshada ee ka kala yimid daafaha dalka. Markii ay howlahani sii kordhayeen tirada iyo kakanaanta, waxaan ogaanay qaab ka mid ah noocyada su'aalaha la weydiinayo.
Qareenada Qaranka Guud
Garyaqaanada Qaranka Guute Ogow Xuquuqdaada Xuquuqda
Haddii aad tahay muwaadin ama aadan ahayn, waxaad xuquuq ku leedahay dastuurka Mareykanka. Wax ka beddelka shanaad wuxuu qof kasta siinayaa xuquuqda inuu aamusnaado: inuuna ka jawaabin su'aalaha uu weydiisto sarkaal booliis ama wakiil dowladeed.
Xeerka Garyaqaanka Qaranka: Ogow Xuquuqdaada inta lagu jiro COVID-19 (Coronavirus)
In kasta oo cudurka COVID-19 uu u baahan yahay tillaabooyin caafimaad oo dadweyne si loo yareeyo saameynta fayrasku ku leeyahay bulshooyinkayaga iyo nidaamyada daryeelka caafimaadka, waa inaan taxaddarnaa oo aan iska caabinno awoodda qoraa iyo rabshadaha.
Dhaqanka Ruckus Amniga Dhaqdhaqaaqayaasha
Dhaqanka amniga waa nooc ka mid ah caadooyinka iyo tillaabooyinka ay wadaagaan beel ka mid ah xubnahooda oo laga yaabo inay ku lug yeeshaan nashaadyo xasaasi ah ama sharci darro ah. Dhaqanka dhaqanka amniga ayaa yareynaya halista xubnaha la soo xiri karo ama ficilladooda la fashiliyo.
Dhaqanka Amniga: Buug-gacmeed loogu talagalay dadka u ololeeya
Resistance ayaa sii kordhayay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, iyada oo dadka u ololeeya ay qaateen xeelado badan oo saameyn badan leh oo lagula dagaallamayo.
Maxay dadka caasiyiinta ahi u sameeyaan wax qabad weyn
Bishii Janaayo 2009, u dhaqdhaqaaqayaasha magaalada Austin, Texas, waxay ogaadeen in mid iyaga ka mid ah, oo u ololeeya caddaan la yiraahdo Brandon Darby, ay galeen kooxaha ka mudaaharaadaya Shirweynihii Jamhuuriga ee (RNC) sida wariye FBI ah.
"Daryeel sii, taxaddar". Rugta daryeelka bulshada
Si tartiib ah kor ugu qaadis iyo u diyaar garowga wax kasta c
"Haddii aan waxqabadno" by @brenna_quinlan Quote by Rob Ho